Ukungazi okutheni ngeBafana kuzomsiza umqeqeshi omusha uBroos - Impempe
Ukungazi okutheni ngeBafana kuzomsiza umqeqeshi omusha uBroos
May 11, 2021 Impempe.com
Usefikile futhi ukhulumisa okomuntu onohlelo olucacile ngafisa ukukwenza kwiBafana Bafana umqeqeshi omusha uHugo Broos. Nokho ke ukhuluma akufani nokwenza.
UBroos nguye ogcine eqokwe yiSafa njengozongena esikhaleni esivuleke kuxoshwa uMolefi Ntseki. Uthi yena kuncane akwaziyo ngeBafana nabadlali bakuleli kodwa lokho kuzomsiza ngoba uzokwazi ukuqoka abadlali ngokubuka abazokwenzela iqembu kunegama noma amava abo.
“IBafana ngiyaze ngesikhathi ngiqeqesha iCameroon. Besiseqoqweni elilodwa emidlalweni yokuhlungela iCAF Africa Cup of Nations (AFCON) ngakho kwaba yithuba elihle kimi ukwazi ngeBafana,” kusho uBroos ekhuluma nabeSABCSport ngoLwesibili ekuseni.
“Ngemuva kwalokho ngiqhubekile nokulandela ibhola lase-Afrika kodwa kumele ngikhulume iqiniso, ngisazodinga isikhathi ukwazi kangcono ngaleli qembu kunalokhu engikwaziyo njemanje.”
Uthe uyazi ukuthi kumele azakhele iqembu lakhe kodwa khona kunjalo imiphumela akumele bese iba mimbi ngoba yiyo ebaluleke ukwedlula konke.
“Yonke into ebholeni ibalulwa yimiphumela. Ungasho noma yini oyifisayo kodwa kuphelela lapho. Ngakho kumele ngazi ukuthi wumsebenzi omuhle lona wokuqala kabusha iqembu kodwa ekugcineni kufuneka imiphumela – kwamina ngifuna imiphumela,” kuchaza le nsizwa edabuka eBelgium.
Umsebenzi ohlalele uBroos usobala
Usobala ke umsebenzi ohlalele uBroos njengoba kuzothi ngoSepthemba kuqale imidlalo yokuhlungela iNdebe yoMhlaba la iBafana iqhathwe khona neGhana, Zimbabwe ne-Ethiopia.
“IGhana ngiyazi kahle kakhulu, iZimbabwe iyingozi futhi angiyazi kahle. Lonke iqembu liyashayeka. Kodwa ukuthi mina ngake ngayishaya iGhana akusho ukuthi sizoyiphinda.
“Okwesibili, kumele siyilungele le midlalo. Kunomsebenzi okumele siwenze ukuze siyilungele le midlalo, ngakho sizobona ngoSepthemba ukuthi iBafana ikulungele yini ukushaya iGhana. Kodwa khona kungenzeka.
“Ngizozikhethela abadlali bami. Njengamanje angazi muntu ngakho abadlali engizobakhetha ngizobe ngibone okuthile kubo. Ibhola kuleli zinga linzima. Uma udlala kuleli zinga kumele ube fithi ngokomzimba, ngokwengqondo nangokolwazi lwamacebo okudlala, ngale kwalokho imiphumela izokuphika. Kunomsebenzi omkhulu okumele wenziwe.”
Uzozibhekela ngokwakhe abadlali
Uthi njengamanje uzohambela imidlalo yeligi yakuleli abheke ukuthi yibaphi abadlali abazothatha iso lakhe, bese ehlunga nakwabaphesheya.
“Uhlelo enginalo njengamanje elokuba nabadlali esizodlala ngabo umdlalo wangoJuni (wobungani). Nokuthi sizokwenza kanjani ukufika lapho. Ngizodinga iphini lalapha eNingizimu Afrika elibazi kangcono abadlali bese sakha sisuka lapho.
“Ngizobe sengibuka nemidlalo ngoba lokho kubalulekile, ukusuka lapho ke sizobe sesibhekisisa nabadlali abaphesheya.”
Previous Previous post: ISwallows nayo ifuna ukushaya eyayo imbobo embawuleni eyiChiefs
Next Next post: LISENETHINI! Kujika izinto njengoba sekusongwa